Cali Khaliif Iyo Waftigiisa Oo Looga Dhaartay Inay Buuhoodle Ku Laabtaan Iyo Ciidamo Hub Badan Wata Oo Lagu Daldalay Buuhoodle+VIDEO
19/6/2017 (BNN) Wararka aan Maanta ka heleyno Magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad ka dhalan karta gacan ka hadal taas oo ay wadaan maleeshiyaad hubeysan.
.Maleeshiyaadkaan ayaa waxa ay ka soo horjeedaan talaabada uu qaaday madaxweynaha maamulka Khaatuma Cali Khaliif Galeyr ee ah in uu ku biiray mudo wadahadal kadib Soomaaliland oo dhowr jeer uu dagaal la galay.
Ciidamada ayaa Cali khaliif u diiday in uu tago magaalada Buuhoodle iyagoo ka soo horjeeda heshiiskii Shanta qodob ka koobnaa ee ay Maalin ka hor kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Khaatumo oo uu hogaaminayo Prof Cali Khaliif Galeyr.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Khaatumo oo ku sugan Magaalada Buuhoodle oo aan la xidhiidhnay ayaanan noo suurtagelin si aan wax uga weeydiino waxa ay ka ogyihiin xiisadaan iyo waliba Maleeshiyaadka Hubeysan ee Cali Khakiif Galeydh uu diiday in uu tago Magaalada Buuhodle ee gobolka Togdheer.
Dhanka kale warar naga soo gaadhaya Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya In Cali Khaliif gacanta laga saaray lacag caddadkeeda la sheegin oo Maamulka Siilaanyo ugu talogalay in wax lagaga qabto dadka kasoo horjeeda heshiiska Cali Khaliif ee ku sugan Buuhoodle,Lama cadayn in ciidamo Somaliland ahi sii galbin doonaan Cali khaliif xili magaaladu kacsan tahay.
More in this category: « Daawo Gudoomiyaha Togdheer Ramaax Oo Lagu Eedeeyay Inuu iibsaday Dhul Albaabka Guriga Badhsaabka Oo Baabuurta La Dhigi Jiray+VIDEO DAAWO:Caruurtii SNM Oo Ka Qayliday Heshiiskii Khaatumostate Qaylo Dhaana U Diray Siilaanyo:Cali Khaliif Kama Duwana Awdalstate Iyo..+VIDEO »